यी हुन् १२ वर्षमा माओवादीले जन्माएका ८२ मन्त्री, कसले के गरे ? – Everest Dainik
यी हुन् १२ वर्षमा माओवादीले जन्माएका ८२ मन्त्री, कसले के गरे ?
नेत्र पन्थी र बबिता शर्मा/
काठमाडौं, फागुन १५ । २०७४ फागुन ९ गते प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक थियो । बैठकमा करिब १७–१८ जना उपस्थित थिए । बैठकमा दुईवटा एजेन्डा थिए, पहिलो–एमालेसँग हुन लागेको एकताका चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्ने र दोस्रो– केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरूका बारेमा चर्चा ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेकाले उनले मन्त्रीका लागि आफ्नो दाबी पेश गरेनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनाव हारेपछि मन्त्रीको दौडबाट बाहिर भए । कृष्णबहादुर महराले आफू मन्त्रीका लागि इच्छुक नरहेको बताए । कारण, उनको चासो सभामुखमा थियो । जब कि यसअघि उनले आफू मन्त्री बन्न प्रचण्डको परिवारदेखि ‘उत्तर दक्षिणका शक्तिकेन्द्र’सम्म हारगुहार गर्ने गरेको आरोप लाग्दथ्यो । गुटको राजनीतिक फाइदा चाहिँ सबैभन्दा बढी गिरिराजमणि पोखरेलले लिए ।
माओवादीभित्र पदका लागि के–के हुन्छ ? बेला–बेला सतहमा आउँछन् । सके आफू मन्त्री हुने, नभए पत्नीका लागि सङ्घर्ष गर्ने । सके आफू सांसद हुने नभए पत्नीका लागि पार्टी वैठकमा हङ्गामा मच्चाउने । माओवादीका कैयौँ नेताको यो ‘कल्चर’ बनेको छ । प्रचण्डसँग सके फकाएर मन्त्री पद लिने, नभए धम्कीको भाषामा पद प्राप्त गर्ने, यो पनि धेरै माओवादी नेताको योग्यताभित्र पर्छ । ‘म पटक–पटक मन्त्री भएँ, यसपालि नयाँ साथीलाई दिऊँ’ माओवादीका धेरै नेताहरूको शब्दकोशमा यस्ता शब्द भेटिन्नन् ।
यस्तो हुँदाहुँदै पनि माओवादी यस्तो ‘फ्याक्ट्री’ बन्यो, जसले शान्ति प्रक्रिया यताका १०–१२ वर्षमा ८० जनाभन्दा बढी मन्त्री उत्पादन गर्यो ।
२०६३ असार २ मा सिक्लेकबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं आएका प्रचण्ड सधैँ शक्ति र सत्ताको राजनीतिममा पकड राखे । यसको फाइदा माओवादीका अन्य नेताले लिए । पटक–पटक मन्त्री भए ।
२०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारबाट माओवादी मन्त्रिपरिषद्मा जान सुरु गरेको हो ।
ओली सरकारभन्दा अगाडि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारसम्म आउँदा माओवादीबाट ७५ मन्त्री बनेका थिए, जसमा ४६ मन्त्री र २९ राज्यमन्त्री थिए ।
सत्ता–राजनीतिमा माओवादी केन्द्रले काँग्रेस–एमालेलाई माथ गर्दै गरेको पछिल्लो एकदशकमा त्यस पार्टीबाट मन्त्री बनेका नेताको सङ्ख्याले देखाउँछ ।
देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री थिए । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो दल माओवादीले एउटै मन्त्रिपरिषद्मा १८ जना मन्त्री पाउनु आफैंमा उसको हैसियतभन्दा निकै ठूलो ‘उपलब्धि’ मानिन्थ्यो । त्यसअगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका ७ मन्त्री र चार राज्य मन्त्री थिए ।
त्यसबाहेक प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । अहिले नयाँ शक्तिका संयोजक रहेका बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भए ।
यी घटनाक्रमले माओवादीले सत्ता राजनीतिमा आफूलाई अब्बल बनाएको जस्तो देखिन्छ ।